बजेट : कर्मचारी तलब खर्च १ खर्ब ३४ अर्ब, भत्तामै ३३ अर्ब ३८ करोड विनियोजन वैदेशिक भ्रमण भत्ता चालू आवभन्दा ७ करोड बढी
भागवत भट्टराई काठमाडौं, १६ जेठ
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही शीर्षकगत खर्चमा कैँची चलाइएको बताएका छन् ।
अपवाद मात्रै कम विनियोजन हुने चालू खर्च कटौती गरेर बजेट विनियोजन गरेका डा. खतिवडाले कर्मचारीलाई दिइने सबै किसिमका भत्ता खारेज गरेको घोषणा गरेसँगै संसदमा तालीको गडगडाहट लागेको थियो ।
भत्ता खारेज भने सबै किसिमका थिएनन् । मासिक २ हजार रुपैयाँको दरले पाउने महँगी भत्ता यथावत् रहेको छ भने स्थानीय भत्ता पनि यथावत् छ । विशेषगरी वैदेशिक भ्रमण र फिल्ड तथा बैठक भत्ता भने कटौती गरिएको हो ।
तथापि, अर्थमन्त्री खतिवडाले यी सबै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । उनले जिन्सी वा जिन्सीबापत दिइने नगदबाहेकको कर्मचारी भत्ताका लागि १२ अर्ब ९५ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । जुन चालू आर्थिक वर्षलाई विनियोजन गरेको भत्ताभन्दा १ अर्ब २२ करोड १८ लाख रुपैयाँ कमी हो भने संशोधित अनुमानभन्दा १ अर्ब १४ करोड कमी हो ।
तलब नबढ्दा भत्ता र भत्ता नबढ्दा तल बढाउने विगतको परम्परालाई तोड्नु नै चूनौतीपूर्ण रहेको अर्थका कर्मचारीहरू बताउँछन् । यद्यपि, कुनै पनि भत्ता पूर्णरूपमा कटौती नगरिए पनि कडाइ गरिएको अर्थका अधिकारीको भनाइ छ ।
अन्य भत्ता शीर्षकको रकम चालू वर्षको तुलनामा १ अर्ब ६६ करोड कम गरिएको छ । चालू वर्षमा यस्तो भत्ता ४ अर्ब २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ६० करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
वैदेशिक भ्रमण भत्ता चालू वर्षको भन्दा ७ करोड रुपैयाँ बढी राखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि विदेश भ्रमण भत्ता ७५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
तर, प्रोत्साहन तथा पुरस्कार भत्ता भने चालू वर्षको भन्दा कम अनुमान गरिएको छ । चालू वर्षमा ६८ करोड २० लाख र संशोधित अनुमानमा ७४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा भने १६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ यस्तो रकम विनियोजन गरिएको हो ।
फिल्ड भत्ता सामान्य मात्रै घटाएर विनियोजन गरिएको छ । फिल्ड भत्तामा २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ चालू वर्षमा विनियोजन आगामी वर्षका लागि २० करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, यो अनुमानित रकम हो, चालू वर्षमा संशोधित अनुमानअनुसार २६ करोड ९ लाख रुपैयाँ फिल्ड भत्ता लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
निरन्तरता दिइएको महँगी भत्ता चालू वर्षभन्दा न्यून मात्रै विनियोजन गरिएको छ । चालू वर्षमा ७ अर्ब ९८ करोड ७ लाख विनियोजन गरिएकोमा आगामी आवका लागि ७ अर्ब १६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय भत्ता पनि निरन्तरता रहेको छ । यो भत्ताको नाममा चालू वर्षमा १ अर्ब ४० करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षलाई बढाएर १ अर्ब ९६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।
त्यस्तै, भत्ताकै रूपमा रहेको जिन्सी वा जिन्सीबापतको रकम बढेको छ । चालू आवमा १९ अर्ब ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको यस्तो रकम आगामी आवका लागि २० अर्ब ४३ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कर्मचारीको तलबबापतको रकम भने घटेको छ । चालू वर्षमा १ खर्ब ४३ अर्ब ३४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ यस्तो रकम विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब ७२ करोड ९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
तलब, महँगी भत्ता तथा स्थानीय भत्ता कर्मचारीलाई कम हुने भनेर कम विनियोजन गरिएको हाेइन । चालू वर्षमा र आगामी वर्षमा पनि नयाँ कर्मचारी दरबन्दी नखुलाइएको र केही कर्मचारीले अवकाश पाउने भएका कारण कम हुने देखिएको छ ।
चालू वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको भत्ता तथा तलबबाट साढे १० अर्ब रुपैयाँ कम विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये करिब ९ अर्ब तलबबापतको रकम कम हो । यो रिक्त दरबन्दी पूरा नभएको कारण कम तलबको अनुमान गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सामान्यतय सबै किसिमका भत्तालाई रकम कटौती गर्ने प्रयास भए पनि जानैपर्ने र गर्नैपर्ने कामका लागि यी रकम विनियोजन गरिएको बताइएको छ ।
तर, तल्लो तहका कर्मचारीको महँगी र स्थानीय भत्ताबाहेकका भत्तामा चालू वर्षमा करिब २ अर्ब बराबरको रकम विनियोजन गरिएको र अहिले त्यो रकम काटिएको अर्थका अधिकारीको भनाइ छ । उच्चपदस्थ अधिकारीको हुने भ्रमणमा तथा अन्य भत्ता यथावत् रहने बताइएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्‍वर खनाल भने अर्थमन्त्रीले भाषण नै गरे पनि यी भत्ता नकाटिने तर्क गर्छन् । 'भत्ता काटिने भनियो, विदेश भम्रण जान कम गरिएला, १/२ महिना खर्च पनि कम होला तर त्यसपछि अवस्था उस्तै हो,' खनालले भने, 'के सिंहदरबारभित्र बिहान संसदीय समितिको बैठक बसेर खाजा तथा खाना खाने कुरा रोकिएला त ?'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १६, २०७७, १३:४९:००